जनता रुवाएर जनप्रतिनिधिले साइकल चढ्दा पनि पाप लाग्छ, गाडी त परको कुरो - Nepal Insider
Home/समाचार/जनता रुवाएर जनप्रतिनिधिले साइकल चढ्दा पनि पाप लाग्छ, गाडी त परको कुरो
जनता रुवाएर जनप्रतिनिधिले साइकल चढ्दा पनि पाप लाग्छ, गाडी त परको कुरो
काठमाडौं : काठमाडाैँ । जनप्रतिनिधिहरुको भनेको जनतालाई सुख सुविधा दिएर केही बाँकी रहे आफुलाई सुविधा लिने हो । चुनावका वेला गरेको वाचाको अक्षरशः पालना गर्नु जनप्रतिनिधिको धर्म हो, कर्तव्य हो । जनतालाई दैनिक परेको कष्टलाई बेवास्ता गरेर आफ्नो सुविधालाई पहिलो प्राथमिकता दिने जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न सोध्न नसक्ने सोझा वा आँट नभएका जनता रहुन्जेल अथवा जनताले आफ्नो स्वभाव परिर्वतन नगरुन्जेल जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो सुविधामा केन्द्रित रहन्छन् ।
कुरा एकदमै सिम्पल छ, देशको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा जनप्रति निधिहरुले आफ्नो सुविधा त्यागेर, जनताका लागि अत्यावश्यक विषयमा र शीर्षकमा मितव्ययी भएर खर्च गर्ने । तर रिपोर्टहरु आइरहेका छन् कि जनप्रति निधिहरु गाडी किन्ने प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । गाडी आवश्यक नै छैन भन्ने होइन तर कस्तो गाडी कुन मुल्यको गाडी किन्ने भन्ने त हुन्छ होला नि ।
एक आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशले गाडी खरीदमा मात्र १ अर्ब ८५ करोड खर्च गरेको छ । आदरणीय जनप्रतिनिधि ज्युहरु आँफुलाई भोट दिएर पठाएका जनताको अवस्था एक पटक फेरी गएर हेर्नु होला । जुन जीवन आम मानिसले बाँचिरहेका छन्, त्यसको तुलना माा त तपाईहरुले साइकल चढ्दा पनि पाप लाग्छ, गाडी त निकै परको कुरा हो । सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य–चौकीहरुले कस्तो सुविधा दिइरहेका छन् ?
कति ठाँउमा त एम्बुलेन्स पनि छैन तर जनप्रतिनिधिका लागि करोड माथिको गाडी छ । फेरि पनि भन्छु– गाडी ठुलो कुरा होइन, चाहिन्छ । तर केही वर्ष जनताका अत्यावश्यक विषयमा केन्द्रित होआँै न । स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, पानी, चुस्त प्रशासन, भरपर्दो सार्वजनिक यातायात, आदि उपलब्ध गराएर, क्रमशः जनतालाई आफुले भोट दिएर पठाएको मान्छेले हाम्रा लागि केही न केही गर्दैछ है भन्ने सन्देश दिएर पो सुविधा लिनुपर्छ ।
गाडी खरीदकै सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले यससम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्, जसमा गाडी खरिदको मापदण्ड, प्रक्रिया तय गरीएको छ । जस अनुसार मुख्य मन्त्री वा समान स्तरको पदाधिकारीले १ करोडसम्मको गाडी किन्न सक्छन्, अरुको हकमा दर्जा हेरी ७५ लाख, ६० लाख, ४५ लाख सम्मका गाडी खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ । तर स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि सवारी साधन खरीद गर्ने बारे कुनै मापदण्ड नै बनाइएको छैन ।
यसको फाइदा उठाउँदै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु आँफु खुशी गाडी खरिद गर्न थालेका छन् । यस विषयमा खोज पत्रकारिता केन्द्रले पनि विशेष रिपोर्ट नै तयार पारेको छ । र यसै कार्यक्रममा हामीले विरगंजका मेयरज्युको विषय प्रशारण गरी फलोअप समेत गरेका थियौँ । मेयर साबले निर्वाचित भएपछि भन्नुभएको थियो– भगवानले दिएको सबै चिज मसँग छ, त्यसैले म सरकारी सुविधा तलब भत्ता केही लिन्नँ ।
पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सबैले जोडले ताली बजाए । तर जोशमा ताली बजाएको तोडले हत्केला दुखेको निको नहुँदै मेयर साबले १ करोड ४५ लाखको गाडी खरीद गर्नुभयो । ८० लाखमा खरिद भएको एउटा गाडी छँदै थियो तर मेयर साबलाई सुहाएन, पुगेन । अनि स्मरण रहोस विरगंज महानगरपालिकासँग आपतकालीन अवस्थामा नभई नहुने एम्बुलेन्स चाहिँ छैन ।
किन छैन भने महानगरपालिकामा बजेटको अभाव भयो रे । विरगन्जकै कुरा गर्दा भारतीय दुतावासले सित्तैमा दिएको मोबाइल स्वास्थ्य भ्यान समेत त्यत्तिकै थन्किएको छ । आवश्यक कामका लागि स्रोत साधन हुँदैन तर सुविधा चाहिए स्रोत साधन सबै जुट्छ । विर गंजको मात्र किन कुरा गर्नु हुन्छ, देशको राजधानी काठमाडौँको कुरा चाहिँ खोइ नि भन्नुहोला । काठमाडाँैका मेयर साबलाई झन् ८५ लाखको गाडी के सुहाउँथ्यो, देशकै राजधानीका मेयर ।
८५ लाख पर्ने गाडी छोडेर उहाँले पनि १ करोड ८० लाख पर्ने गाडी खरीद गर्नु भएको रहेछ । भरतपुर महानगर पालिका, भो भरतपुर महानगरपालिकाको कुरा नगरौँ । केही नभन्दा त यसो भन्यो र उसो भन्यो भनेर टोक्न आउने मेयरज्युका शुभचिन्कहरुले केही भन्यो भने के गर्लान् । खोज पत्रकारीता केन्द्रले सबै डिटेल रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ, बाँकी त्यतै हेर्नुहोला ।
यति ठुलो पिपलको रुख भित्र गणेश भगवानको मन्दिर ! कस्तो अनौठो मन्दिर ,हेर्नुहोस भिडियो..
‘प्रेमगीत–३’ मा आफूले पाएको भूमिकालाई इमानदारीसाथ निभाउनेछु : क्रिस्टिना गुरुङ
निकालियो फोक्सोकाे ट्युमर नेपालमै पहिलो पटक बिना अपरेसन
धादिङमा तीन ओटा गाडी एक–आपसमा ठोक्किए, यस्तो छ घाइते हुने र मृ**त्यु हुनेको विवरण